ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်သည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ဆက်နွှယ်နေပြီး၊ ထို့ကြောင့်ပြဌာန်းထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်မှာအခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောခြေလှမ်းများလှမ်းနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ။ stepsရာမခြေလှမ်းများ, ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့် နောက်ပြန်လှည့်.
၏အစိုးရစဉ်အတွင်းပထမ ဦး ဆုံး JoséLuísRodríguez Zapateroနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအားပေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကောင်းသည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်တစ်နေ့လျှင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသောအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကနည်းပညာကစျေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုလုပ်ရတယ် အဓိကအသုံးစရိတ်များ နောက်ဆုံးမှာတော့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအလောင်းအစားလုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ကိုယူခဲ့တဲ့စပိန်လူမျိုးတွေရဲ့အကောင့်တွေဖြစ်လာတယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်မိသားစုများစွာသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမှရရှိသောစုဆောင်းငွေများအမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အားလုံးသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တိကျသောလက်ရေး (အချို့သောအရာများသည်မရှင်းနိုင်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရမည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပြissuesနာများနှင့်အထွေထွေဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းရှိအမျိုးမျိုးသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ရာသည်လူကြိုက်များလာပြီးအမြတ်အစွန်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကိုရရှိရန်သုတေသနပြုမှုများစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ လွန်ခဲ့သော9နှစ်ကထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ Zapatero အစိုးရလက်ထက်တွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာaကြားတွင်ရှိသည် ၆၀% နှင့် ၈၀% အခုထက်စျေးကြီးတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဆိုလာစွမ်းအင်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်စပိန်နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းစတင်ခဲ့သည့်အခါစက်မှုဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့၏ ဟိုဆေး Sebastianနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဏ္theတွင်ပရီမီယံနှင့်ထောက်ပံ့ငွေများကိုစတင်လျှော့ချခဲ့သည်။ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပသည့်အခါမတူကွဲပြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများကပြောဆိုခဲ့သည် စပိန်စီးပွားရေး၏အခြေခံကျသောကဏ္noများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိပါ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့်အတူအန္တရာယ်များကိုယူသူစပိန်အတော်များများက, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောမှတ်တိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းက, ထိုတိုးတက်မှုကြောင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ sector, မည်သည့်ဖြတ်တောက်မှုကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမထင်, ထင်
သို့သော်သူတို့မှားခဲ့သည်။ The PP အစိုးရ ၎င်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္inတွင်အကြီးအကျယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အခွန်များတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အခြားသောဥရောပနှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်နည်းပညာများကိုဆက်လက်တီထွင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုရွေးချယ်သောမိသားစုများစွာသည်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု amortizing နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအသုံးချခြင်းမှဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။
ဒီ "ရှုပ်ထွေးမှု" အားလုံးကိုငါတို့ကျော်ကြားတဲ့၏အသွင်အပြင်ထည့်ပါ နေအခွန် စွပ်စွဲခံရသူဝန်ကြီး၏လက်မှာ José Manuel Soria ။ မင်းကိုပေးရမယ့်အခွန် ကိုးယူရိုပေါင်း VAT သင့်ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုစီအတွက်နှင့် တစ်ခုချင်းစီကို Kw / h များအတွက်€ 0,05 ဒါက Self- စားသုံးနှင့် Self- ထုတ်လုပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအခွန်ကသင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်တွေအားလုံးကိုထုတ်လွှတ်ပေးပေမယ့်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကိုမသုံးဘဲနေစေတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူမသည်ကျန်တဲ့သူတွေကိုရောင်းချပါလိမ့်မယ် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီအတွက်€ 0,12 ။ ဤအခွန်ကြောင့်စပိန်သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပြissuesနာများသို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးစပိန်သည်မျိုးဆက်သစ်များ၊ ကြီးထွားမှုသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆွဲဆောင်မှုအဆင့်၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အားလုံးနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
ပိုမိုမကြာသေးမီကရေတွက်။ ၂၀၁၅ သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအတွက်ဆိုးရွားသည့်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်လုံးတွင်လေရဟတ်တာဘိုင်တစ်ခုမျှမတပ်ဆင်ထားပါ။ နေနှင့်လေကဏ္ sector အတွက်မည်သည့်မူဝါဒမျှတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ခြင်းမရှိသေးပါ။ နေအခွန်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့် Rajoy အစိုးရသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထပ်မံမနစ်မြုပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ စပိန်ဆိတ်ကွယ်ရာအီးယူအတွက်တစ်ခုခုဝတ်ပြုကြလော့ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » လေစွမ်းအင် » စပိန်နိုင်ငံသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပြန်လည်ခြေလှမ်းလှမ်းသည်